Onja vaovaonà fametavetàna sy fanararaotana ankizy mahazo an’i Pakistàna · Global Voices teny Malagasy
"Ilainay maika ny lisitr'ireo #maditra ara-piraisana ara-nofo aty Pakistàna"
Voadika ny 09 Desambra 2019 15:00 GMT
Sarinà ankizy iray noararaotina. Sary avy amin'i Moushfuf Chowdhury nalaina tao amina'ny Flickr . CC BY-NC-ND 2.0
Vao herintaona mahery kely taorian'ny namonoana an'i Imran Ali noho ilay raharaha mikasika ny fanararaotana ankizy tena malaza any Pakistàna, isan'izany ny fanolanana sy famonoana an'i Zainab Ansari zaza enina taona, nosamborin'ny mpitandro filaminana i Sohail Ayaz — mpametaveta, mpanolana ankizy sady fantatra fa maditra amin'ny resaka firaisana ara-nofo — noho ny fampifohana zava-mahadomelina sy fanolanana ankizy lahy 13 taona.
Tamin'ny 12 Novambra 2019, nosamborin'ny manampahefana any Rawalpindi, tanàna iray any Punjab faritany any Pakistana, i Ayaz taoriana kelin'ny niraketan'ny renin'ilay niharan-doza ny Tatitra voalohany :
Nosamborin'ny mpitandro filaminana ao Rawalpindi ilay mpanolana zaza sady mpanao sary mamoafady izay lazaina ho manana fifandraisana amin'ny Dark Web ( tranonkala mainty). Efa voaheloka tamin'ny raharaha fanolanana zaza tany Angletera izy taloha. Voarakitra ho maditra amin'ny resaka firaisana ara-nofo mandra-pahafatiny izy.
Voaheloka ho mpitsirirtra ankizy, noroahan'ny governemantan britanika ho any Pakistana i Ayaz noho ny fanolanana ankizy maro, sy noho ny fifandraisany tamin'ny tambajotran'ny mpanao sary mamoafady amin'ny ankizy tany Romania. Amin'ny maha-mpanamarina bokim-bola matihanina an'i Ayaz dia nantsoin'ny governemantan'i Khyber Pakhtunkhwa (KP) izy ho mpanolontsaina tamin'ny 2017, nefa tsy nohadihadiany ny zava-nisy tany aloha, tsy fantatry ry zareo fa efa nahavita sazy efa-taona tany am-ponja izy :
Niasa amin'ny maha-mpanolotsainan'ny governemanta KP azy i Sohail Ayaz nanomboka ny 1 novambra 2017 ka hatramin'ny fiafaran'ny fifanarahana nataony tamin'ny 19 novambra 2019 – nambaran'ny lehiben'ny mpitandro filaminana any Rawalpindi fa azo antoka fa lany amin'ny fanomezana fahafanam-po ny filàny amin'ny fitsiriritana ankizy ny ampahany betsaka amin'ny karamany Rs 300k isam-bolana.
Nofoanan'ny Ivontoeran'ireo mpanamarina bokim-bola matihanina any Pakistàna (ICAP) ny fisoratan'i Sohail Ayaz anarana tamin'ny 2009 – taorian'ny nanamelohana azy tany Angletera noho ny fanolanana zaza tsy ampy taona sy fanànana sary mamoafady ataon'ny ankizy.
Nandritra ny famotorana naharitra andro dimy momba io heloka bevava nataony farany io, dia niaiky i Ayaz fa ankizy maherin'ny 30 no naolany ary nampiakariny any amin'ny Dark Web (tranonkala maizina ) ireo lahatsary, nahatonga adihevitra tamin'ny aterineto hitodika any amin'ireo fihanaky ny fanolanana zaza ao amin'ny firenena ary ny filàna ny fandraisana fepetra hisakanana ireo zaza tsy ampy taona hanjary tra-doza mitàna ny toerana voalohany :
Niaiky izy fa nanolana ankizy 30. Fahita hatraiza hatraiza ny fanararaotana ny ankizy any Pakistana ahitàna toerana maro tena fipoiran'ny habibiana. Tsy maintsy vahana io olana io alohan'ny zavatra rehetra.
Nitranga ny marainan'ny 15 novambra ny fampatsahivana maika manery ny filàna ny fanavaozana, rehefa nitantara trangan-javatra iray hafa mahatsiravina ny bitsik‘ilay mpilalao sarimihetsika pakistaney Nadia Jameel : zazalahy kely sivy taona naolan'ny tompon-tranony tamin-kerisetra. Na dia efa voasambotry ny manampahefana aza ilay nahavanon-doza, dia miteraka ahiahy maro ny ratra anaty mahazo ilay zaza sy ny mety ho fahasitranany ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsaina.
Ny valin-kafatra ho an'ilay bitsik'i Jameel dia ahitàna ireo sosokevitra hoe mety hamehy ny faniriana hiray ara-nofo ny fanekena ny fivarotantena ho ara-dalàna, tahaka izany koa ny fitakiana rafitra natokana ho fiarovana ny ankizy ary ny adidin'ny governemantam-paritra sy governemanta federaly hamolavola paikady matanjaka manoloana ny rafitra tsy mahomby .
Mitombo ny isan'ny fanararaotana ankizy
Na eo aza ny sazy henjana ampiharin'ny firenena amin'ny fanararaotana ankizy — isan'izany ny famosirana, figadrana mandrapahafaty ary ny fanamelohana ho faty — dia mbola mampijaly ankizy ihany ireo maditra amin'ny firaisana ara-nofo ary mitombo hatrany ny isan'ireo tranga.
Tamin'ny 2018, notaterin'ny Fikambanana Sahil; ONG any Pakistana miasa amin'ny sehatra momba ny fanararaotana ankizy, fa niakatra 11 isanjato ny trangam-panararaotana ankizy raha oharina tamin'ny taona lasa. Amin'ny trangam-panararaotana ankizy 3.832 voarakitra, 55 isanjaton'ireo ankizy niharan'ny fanararaotana dia vavy ary lahy ny 45 isanjato. Fa mbola mampitebiteby ireo isa voaray ny 2019 : ankizy pakistaney hatramin'ny 1.304 (729 vavy ary 575 lahy ) no niharan'ny endrika fanararaotana ara-nofo isankarazany tato anatin'ny enina volana, ka nahatonga ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy hametraka fanontaniana maro :
Akorisaho ny fanisana andronao dia hahita tranga vaovao momba ny fitsirirtana ankizy any Pakistana isaky ny 10 minitra ianao. Angamba mila manana masoivoho iray miavaka natao ho fiarovana ny ankizy isika ? Misy ve ny zavatra tahaka izany ? @ShireenMazari1 inona no atao amin'ireo tranga fanararaoatana ankizy naharaisana tatitra tany aloha?
Ilaintsika maika ny lisitr'ireo #maditra amin'ny firaisana ara-nofo, aty Pakistana, atao mora azo jeren'ireo faritra manodidina/ny birao sns.
Faharoa, fa nahoana ny FIA no tsy nanadihady ny ‘anton'ny fandroahana’ Pakistaney?
Fahatelo, iza daholo ireo mpanamora zavatra avy ato anatiny ? #SohailAyaz #ProtectChildren #ChildAbuse #Kasur #SexualAbuse https://t.co/dlTvKsEOnV
Ny FIA nolazaina tamin'ny bitsika etsy ambony dia Masoivoho Federaly mpanao fanadihadiana.
Ahoana ireo toetoetran'ny mpiremby ?
Ny ampahany amin'ny fanamby amin'ny fanasaziana ireo meloka amin'ny firaisana ara-nofo alohan'ny hamelezany dia matetika tsy mora fantarina ireo mpiremby. Nanazava tao amin'ny bilaogin-dahatsoratra iray ilay mpanoratra Mehe Khurseed :
Satria andrasanay ny maha-irery ireo mpisetrasetra, marary saina ary mpampihorohoro, tsy azonay jerena hoe rahoviana no sariaka, mahafinaritra, eto an'ivonay ny mpiremby iray.
Matetika, minamana amin'ny olona kendreny na mitady ireo haza mora azo ireny mpiremby ireny– ireo ankizy afaka pehana sy fandrihana, tahaka ny zava-niseho tamin'i Zainab Ansari sy ireo maro hafa izay angamba tsy anton'ny fandrakofana amin'ny haino aman-jery ny anarany sy ny tarehiny.
Na dia mahafantatra sy sahirana amin'izany loza izany aza ny fiaraha-monina, ny ankamaroan'ireo zaza tsy ampy taona voakendry dia avy any amin'any faritra mahanatra kokoa, ahitàna ireo ankizy miasa izay mora kokoa ny samborina kokoa.
Tsy fomba andresena lahatra ny fanamelohana ho faty
Nambaran'i Sarrop Ijaz amin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny Dawn.com, fa na ny fanamelohana ho faty aza tsy misy fiantraikany maharesy fanakanana ireo heloka bevava mahatsiravina toy izao. Nohamafisiny ihany koa fa amin'ny tranga tahaka izao dia mirona amin'ny fifantohana bebe kokoa amin'ireo nahavanon-doza ireo tatitra fa tsy nihevitra ny hijery ny tena zava-misy marina eny an-kianja sy ny halehiben'ilay olana.
Ny sasany milaza fa ny famosirana, tahaka izay niseho tany Indonezia, angamba no vokatra mety kokoa ho an'ny heloka amin'ny firaisana ara-nofo, saingy nilaza ireo mpiaro ny zon'olombelona fa na ireo sazy tahaka izany aza tsy ampy ho fandresena lahatra.
Na izany aza, maro no mino fa tsy resaka maika ny fahombiazan'ny sazy tahaka izany, fa ny zavatra tena maika dia ny fananganana ny vondron-kery manokana hiandraikitra ny famantarana ireo olo-meloka, hanadihady lalina kokoa ny fisainan'ireo olon-tsy vanona tahaka izany ary hanaitra ny fahatsapantena momba ny fanararaotana ara-nofo manjo ny zaza tsy ampy taona, sns….
Fa mety ho hita ao anatin'ny vahaolana ve ny fitaizàna indray, fara-faharatsiny ho an'ireo heloka tsy dia henjana loatra ? Simon Bailey, lehibe iray ao amin'ny polisy britanika, izay mitarika ny hetsika Operation Hydrant, fanadihadiana momba ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy, no nanoso-kevitra ny vahaolana tahaka izany — na dia niaiky aza izy fa hitan'ny olona ho sarotra ny hihaino ny fomba fiasa tahaka izao.
Mandritra izany fotoana izany, nitalaho tamin'ny manampahefana ireo pakistaney mpitsabo aretin-tsaina mba hanao dingana azo tsapain-tànana hisorohana ny fanolanana sy ny famonoana ankizy, fa tsy hihevitra ireo trangan-javatra ireo ho toy ny raharaha mikasika ny lalàna sy ny filaminana fotsiny. Ny sosokevitr'izy ireo dia ny fanaovana fanentanana mahomby amin'ny haino aman-jery mba hanabeazana ireo vondrom-piarahamonina mikasika ny amin'ireo faritra marefo ho an'ny ankizy, fanondroana mazava tsara ireo mety ho fandrahonana sy ireo singa mety hitera-doza ary famantarana ireo endrika samihafan'ny fanararaotana ara-batana, ara-pihetsehampo sy fanararaotana ara-nofo ary ny fanaovana tsinontsinona.